Denmark Atụmatụ Atụmatụ | Otu Di na Nwunye
Denmark bụ udo, mara mma ma dị mma. E wezụga na ahụmahụ dị egwu na-ahụ anya mgbe ị na-aga Denmark, ọ bụ n'ezie oriri maka uche niile dịka ọ na-etu ọnụ n'ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị mma n'ụwa. Site na mmiri dị jụụ n'akụkụ isi obodo dị na Copenhagen ma kpaa akụkụ nke Mlns Klint ka ọ bụrụ nke dị na Aborrebjerg, Denmark kwesịrị ka a na-agagharị.
Obodo kacha nta na Scandinavia, Denmark kachasị nleta mgbe ejikọtara ya na ndị ọzọ na akara na Sweden, nakwa na-eme obere nke agwaetiti. Ka o sina dị, ebe mara mma na ebe ntụrụndụ dị mma zuru oke maka ịpụ na Danish.
Ụbọchị 4: Copenhagen
Ụbọchị 6, tinye: Malmo (Sweden)
8 - 10 ụbọchị, tinye: Gothenburg (Sweden)
10 - 12 ụbọchị, tinye: Alborg
12 - 14 ụbọchị, tinye: Limfjord, Lovns Bredning
14 - 17 ụbọchị, tinye: Aarhus
Ọzọ: Tụlee ịkwasa Nationalpark Vadehavet n'ebe ọdịda anyanwụ Denmark, na ọbụna n'ebe ndịda na Hamburg (Germany).
asụsụ: Danish na German, kama o yiri onye ọ bụla na-asụ Bekee. Ọtụtụ ụmụ amaala gụrụ akwụkwọ na-asụ ma ọ dịkarịa ala asụsụ atọ ma ọ bụ anọ na-eji nwayọọ.
Ego: Danish Krone (DKK). DKK bụ 7 maka 1 USD.
Ike Ike: Na Denmark, ntọala ike bụ ụdị E na K. Mkpanaka voltage nkeji bụ 230 V na usoro njikarị bụ 50 Hz.
Mpụ na Nchedo: Denmark bụ ebe dị nchebe na ebe mgbaba dịka ọ dị n'ụwa. Mmebi iwu dị oke ala, ma e wezụga mpempe mara mma nke na-eme ihe ọ bụla na-ekwu banyere obere ohi. Njem dị jụụ.
Nọmba Mberede: 112 maka Mberede na 114 maka ndị uweojii.
Gụkwuo Banyere Denmark!